30 सर्वश्रेष्ठ सबै समावेशी र संयुक्त राज्य अमेरिका मा जोडीहरु को लागी स्की रिसोर्ट्स
By भिक्टोरिया अकपान टीएमएलटी सेप्टेम्बर 16, 2021 परिवार, जीवन शैली, यात्रा0टिप्पणिहरु
- तपाइँ नजिकै रिसोर्ट्स -
एक यात्रा को लागी कि तपाइँ पैसा बचाउन को लागी अझै पनी तपाइँ आराम गर्न को लागी र आफैंलाई रमाईलो गर्न को लागी मद्दत गर्न को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकाको सबैभन्दा राम्रो सबै समावेशी रिसोर्ट्स मा, तपाइँ मात्र त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस धेरै धेरै।
यी पूर्ण आवासहरु पर्यटकहरु लाई सुरुचिपूर्ण अपमार्केट कोठा देखि स्वस्थ फार्म-देखि-टेबल भोजन को लागी निर्देशित गतिविधिहरु लाई तपाइँ बारम्बार गर्न चाहानुहुन्छ, बारम्बार, उनीहरुलाई बनाउन को लागी प्रस्ताव गर्दछ। परिवार, जोडी, वा एकल को लागी आदर्श उनीहरुको स्वास्थ्य सुधार गर्न कोसिस।
हाम्रो छनौट प्रीमियम, लक्जरी रिसोर्ट्स बाट सबै trimmings संग लग केबिन मा अधिक देहाती आवास र केहि पनी सामेल छन् ओछ्यान र नाश्ता शैली व्यवसायहरु.
चीजहरु तपाइँ मेसा मा गर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो सूची मा, तपाइँ तटीय घरहरु, पर्वत retreats, र यहाँ सम्म कि दोस्त ranches पाउनुहुनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा समावेशी रिसोर्ट्स
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै समावेशी रिसोर्ट्स देश को दृश्य को रूप मा विविध छन्, उष्णकटिबंधीय रिसोर्ट्स बाट सबै समावेशी मूल्यहरु संग देहाती ranches, भिक्टोरियन होटल, र पर्वत लज सम्म।
परम रोमान्स रिट्रीट यो वयस्क मात्र मा छ फ्लोरिडा मा सबै समावेशी रिसोर्ट। एक भिजेको टब संग एक निजी बरामदा, एक फ्लैट स्क्रीन स्मार्ट टिभी, र एक pillowtop गद्दा संग एक आरामदायक ओछ्यान सबै प्रत्येक विशाल बंगला मा शामिल छन्।
समुद्र तट मा एक योग कक्षा लिनुहोस्, एक निजी tiki डु on्गा मा खाडी बाहिर फ्लोट, वा छ साइट मा रेस्टुरेन्ट मध्ये एक मा खाना।
साइकल पाहुनाहरु को उपयोग को लागी उपलब्ध छ, साथ साथै दैनिक समूह योग पाठ, विभिन्न पूल र Jacuzzis, र एक साइट मा स्पा (उपचार को लागी लागत अतिरिक्त छ)।
पाहुनाहरुलाई विस्टा वर्डे अतिथि खेत एक ग्रामीण जीवनशैली बाँच्न सक्नुहुन्छ जबकि अझै पनी अचम्मको र विलुप्त विलासिता को मजा लिदै। यो ऐतिहासिक खेत फोन, टिभी, वा अतिथि कोठा मा इन्टरनेट छैन, अतिथिहरु लाई विच्छेद गर्न को लागी अनुमति।
एक स्विमिंग पूल, मनोरम दृश्यहरु संग सामुदायिक लाउन्ज क्षेत्र, फिटनेस सुविधा, इनडोर सवारी क्षेत्र, र डोरी कोर्स संग बच्चाहरु को खण्ड उपलब्ध सुविधाहरु को बीच मा छन्।
यो परिवार को स्वामित्व वाला रिसोर्ट एक न्यानो र मैत्री स्वागत र धेरै राम्रो, पुरानो शैलीको रमाईलो सँगै गर्न को लागी संभावनाहरु को प्रशस्त संग अतिथिहरु लाई स्वागत गर्दछ।
यो रिसोर्ट आफ्नो व्यापक गतिविधिहरु को कार्यक्रम को लागी प्रसिद्ध छ, जो हितहरुको एक विस्तृत श्रृंखला को लागी पूरा गर्दछ।
एक च्याम्पियनशिप गोल्फ कोर्स र एक विश्व स्तरीय स्पा पनि वुडलोच पाइन रिसोर्ट मा उपलब्ध छन्।
भित्री र बाहिरी पौंडी पोखरी, चट्टान चढाई पर्खाल, कयाकिंग, स्नोशूइing, र राती मनोरञ्जन उपलब्ध सुविधाहरु मध्ये छन्।
सबै समावेशी सानो सेन्ट सिमन्स टापु रिसोर्ट मा लज शान्त, एक्लोपना, र प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्नेहरु को लागी आदर्श हो।
यो ११,००० एकड जमिन र निजी समुद्र तटहरु को सात माईल भन्दा माथि छ, तैपनि मात्र ३२ जना लाई कुनै पनी समय मा बस्न अनुमति छ। यो हो एक धीमी गति को लागी खोज व्यक्तिहरु को लागी आदर्श गन्तव्य, एक सुखद वातावरण मा निजीकृत उपचार संग।
खाना शेफ द्वारा साइट मा तैयार, द्वीप बाट र बाट डु boat्गा ढुवानी, र दैनिक प्रकृतिवादी नेतृत्व भ्रमण सबै उपलब्ध छन्।
यो रिसोर्ट, जो सक्रिय परिवारहरु को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो सबै समावेशी रिसोर्ट्स को रूप मा जानिन्छ, सबै कुरा को एक सानो बिट प्रदान गर्दछ।
क्लब मेड Sandpiper खाडी, धेरै अन्य क्यारिबियन सबै समावेशी रिसोर्ट्स जस्तै, आगन्तुकहरु पूल द्वारा आराम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, पानी गतिविधिहरु मा भाग लिन्छन्, र उनीहरु लाई धेरै मनपर्छ जस्तै खान र पिउन।
अनुभवी प्रशिक्षकहरु संग खेल सुविधाहरु, बच्चाहरु क्लब, र आउटडोर पूल सुविधाहरु को बीचमा छन्।
6. टक्सन, एरिजोना मा सेतो घोडा खेत
सेतो घोडा खेत सबैभन्दा ठूलो ठाउँ छुट्टी को लागी रहने छ कि पश्चिमी अमेरिकी संस्कृति को एक साँचो अनुभव प्रदान गर्दछ।
यो होटल अक्सर एक दोस्त खेत र एक लक्जरी रिसोर्ट को बीच एक क्रस को रूप मा वर्णन गरीएको छ किनकि यो यसको आगन्तुकहरु को लागी सबै समावेशी प्याकेजहरु प्रदान गर्दछ।
सुविधाहरु एक तातो पोखरी र तातो टब, एक मनोरन्जन क्षेत्र, एक स्पा, रात्रि मनोरन्जन, र बच्चाहरु को गतिविधि पात्रो.
7. Skytop, पेन्सिलभेनिया मा Skytop लज
यो Skytop लज, Poconos पर्वत को मुटु मा स्थित छ, एक बितेको अवधि को लागी अतिथिहरु लाई परिवहन।
यो प्राचीन लज, १ 1928 २ मा निर्मित, एक परिवेश, लक्जरी रिसोर्ट को साथसाथै कुनै न कुनै बाहिरी क्षेत्र को उपयोग संग अतिथि प्रदान गर्दछ। त्यहाँ ५,५०० एकर सम्पत्ति मा गर्न को लागी धेरै चीजहरु छन्।
स्पा सुविधाहरु, बाहिरी साहसिक गतिविधिहरु, र उत्तम भोजन अनुभवहरु को बीच मा छन्।
8. Tucson, एरिजोना मा Miraval एरिजोना रिसोर्ट र स्पा
यो Miraval एरिजोना रिसोर्ट र स्पा एक कल्याण छुट्टी को लागी प्रमुख साइट हो, आश्चर्यजनक पहाड दृश्यहरु र उपचार मरुभूमि हावा को बीच एक सन्तुलन हड्ताल।
यो रिसोर्ट व्यक्तिहरु को लागी जो केहि एक्लो समय को जरूरत को लागी महान छ, यो सबै समावेशी मूल्य को रूप मा राम्रो संगै स्पा सेवाहरु को पुनरुत्थान को एक चयन प्रदान गर्दछ।
शरीर कायाकल्प अनुष्ठान, कपाल हेरचाह, स्किनकेयर, र ऊर्जा उपचार उपचार सबै यस पुरस्कार विजेता स्पा मा उपलब्ध छन्।
9. Kachemak खाडी जंगल लज, अलास्का
सबै समावेशी Kachemak खाडी जंगल लज अलास्का वातावरण आदिम छ, तर लक्जरी कोठा, उत्तम व्यञ्जन, र bespoke गतिविधि प्याकेजहरु केहि बाहेक यस्तै छन्।
पेटू भोजन, एक सुन्दर वातावरण मा विलासी आवास, र व्यक्तिगत निर्देशित प्रकृति अनुभवहरु उपलब्ध सुविधाहरु को केहि मात्र हुन्।
10. Mackinac टापु, मिशिगन मा भव्य होटल
ग्रान्ड होटल, ऐतिहासिक Mackinac टापु मा एक पहाड मा बसेको छ, जहाँ कुनै कारहरु लाई अनुमति छैन र घोडा को लागी गाड़ी यातायात को प्राथमिक मोड हो, एक साँचो अमेरिकी सौन्दर्य हो।
यो एक उत्तम सबै समावेशी रिसोर्ट पनाहगाह, इतिहास र संसारको सबैभन्दा लामो बरामदा को घर मा खडा छ।
व्यक्तिगत रूप देखि डिजाइन गरीएको कोठा, एक आउटडोर पूल, रात्रि नृत्य, लन खेल, र दैनिक दिउँसो चिया सुविधाहरु को बीच मा छन्।
10 संयुक्त राज्य अमेरिका मा सर्वश्रेष्ठ जोडे रिसोर्ट्स
1. हलमार्क रिसोर्ट - क्यानन बीच, ओरेगन
हलमार्क रिसोर्ट, देशको सबैभन्दा रोमान्टिक होटल मध्ये एक, उत्तरी ओरेगन मा समुद्री तट को सबैभन्दा सुन्दर टुक्राहरु मध्ये एक मा स्थित छ, प्रसिद्ध Haystack रक लाई हेरेर।
यो तपाइँ एक मा आराम संग घुम्न को लागी अनुमति दिन्छ समुद्र तट को ठूलो खिचिएको छ कि बालुवा डलर संग teeming छ कम ज्वार मा, तपाइँको ढोका बाट मात्र खुट्टा।
रंगीन समुद्री जीवन जस्तै स्टारफिश र हर्मीट केकडाले भरिएको ज्वलन्त ज्वार पोखरी अन्वेषण गर्नुहोस्, र नोभेम्बर देखि जनवरी र मार्च देखि जून सम्म ग्रे व्हेलहरु लाई माइग्रेट गर्न को लागी एक नजर राख्नुहोस्।
प्रशान्त को दृश्यहरु संग बालकनीहरु, साथै ग्यास fireplaces र दुई व्यक्ति स्पा टब, कोठा मा उपलब्ध छन्।
2. Auberge du Soleil - नापा घाटी, क्यालिफोर्निया
नापा उपत्यका एक हो लोकप्रिय हनीमून गन्तव्य, तर रोमान्टिक पलायन को लागी कुनै पनी जोडी लाई माया गरीन्छ, खास गरी यदि उनीहरु Auberge du Soleil मा रहन्छन्।
यस प्यारा रिसोर्ट मा आवास, ओक र जैतून का रूखहरु बीच बसीएको छ, दाखबारी र मायाकामास पर्वत को बेमिसाल दृश्य संग।
यो पाक जोडीहरु को लागी एक हटस्पट हो, र यो हो यसको वाइन देश खाना को लागी परिचित छ, यस तथ्य को लागी धन्यवाद कि यो एक मिशेलिन-तारांकित फ्रेन्च रेस्टुरेन्ट द्वारा स्थापित गरीएको थियो।
साइट मा, त्यहाँ एक १५,००० बोतल तहखाने, साथ साथै एक क्याफे र अधिक आकस्मिक भोजन र सूर्यास्त को टोस्टिंग को लागी बार छ।
३. शान्ति बे बीच हाउस रिसोर्ट - म्याराथन, फ्लोरिडा
यो मेक्सिको को खाडी को लक्जरी, एकान्त, र मनोरम दृश्यहरु को लागी जोडीहरु को लागी यो रिसोर्ट पार गर्न गाह्रो छ।
म्याराथन कुञ्जी मा, यो फ्लोरिडा कुञ्जी मा शीर्ष रिसोर्ट्स को एक हो, उष्णकटिबंधीय भिक्टोरियन शैली घरहरु मा बहु-कहानी दुई- र तीन बेडरूम सुइट मा विभाजित आवास को पेशकश।
सबै एक पूर्ण रूपले सुसज्जित गउरमेन्ट भान्छा, साथै दुबै स्तर मा फ्रेन्च ढोका सामेल छन् कि मेक्सिको को लुभावनी खाडी संग विशाल पोर्च को लागी नेतृत्व गर्दछ।
एक सुन्दर निजी समुद्र तट, एक निजी मरीना डु sight्गा दर्शनीय स्थल भ्रमण, एक oceanfront tiki बार, तीन पौंडी पोखरी (एक वयस्क मात्र), र पानी गतिविधि भाडामा पाहुनाहरु को लागी उपलब्ध छन्।
ट्रिपल क्रीक खेत - डार्बी, मोन्टाना
ट्रिपल क्रीक खेत, डार्बी, मोन्टाना मा स्थित छ, र मोन्टाना रकीज मा शानदार Bitterroot पर्वतहरु बाट घेरिएको छ, लगातार दुनिया को सर्वश्रेष्ठ रिसोर्ट्स को बीच मा क्रमबद्ध छ।
यो एक सबै समावेशी उजाडस्थान छुट्टी हो कि विलासी लग केबिनहरु र खेत घरहरु मा रातभर रहन्छ। कोठा को सबै एक काठ जलेको फायरप्लेस र एक तातो टब जहाँ तपाइँ ताराहरु मा आराम गर्न सक्नुहुन्छ पहुँच मा सामेल छन्।
पैदल यात्रा, घोडा सवार, गोल्फ, र कुकुर स्लेजिंग मात्र वर्ष भर मा उपलब्ध गतिविधिहरु को केहि हो। ताजा, स्थानीय सामाग्री संग तयार पेटू भोजन पनि शामिल छन्।
5. Dunton स्प्रिंग्स रिसोर्ट - डोलोरेस, कोलोराडो
१ thऔं शताब्दीको भूत शहरमा यसको आफ्नै खनिज तातो स्प्रिंग्सको साथ संरक्षित छ, डन्टन हट स्प्रिंग्स पृष्ठभूमि को रूप मा सान जुआन पर्वत संग एक लुभावनी उजाड स्थान सेटिंग समेटेको छ।
पाँच तारा रिसोर्ट यो सबै बाट टाढा प्राप्त गर्न को लागी एक आदर्श ठाउँ हो र एक तपाइँको ख्याल राख्नु भएको संग पुन: जडान गर्नुहोस्।
एन्टिक लग केबिन को एक औंठी एक शानदार स्पा, एक राम्रो स्टक पुस्तकालय, र एक बार को रूप मा सुविधाहरु संग भव्य getaways मा मर्मत गरिएको छ।
6. हाना-माउ रिसोर्ट-माउ, हवाई
हाना-माउ रिसोर्ट, जो माउ को तटरेखा को एक अलग खिंचाव मा हाना खाडी अनदेखी, अक्सर दुनिया को सबैभन्दा रोमान्टिक लक्जरी रिसोर्ट्स को रूप मा उद्धृत गरीन्छ।
उत्कृष्ट सेवा को अपेक्षा,aविश्व स्तरीय स्पा, उत्कृष्ट भोजन, र गतिविधिहरु को एक ठूलो विविधता। कुनै टेलिभिजन वा अलार्म घडीहरु संग, कोठा धेरै ठूलो र परम शान्ति प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ।
7. सानो पाम टापु रिसोर्ट र स्पा - सानो मशाल कुञ्जी, फ्लोरिडा
लिटिल पाम आइल्याण्ड रिसोर्ट र स्पा मा समुद्री जहाज वा डु boat्गा बाट एक रोमान्टिक प्रेमीहरुको पलायन को लागी आइपुग्नुहोस्, र एक झूला मा आराम गर्नुहोस् वा सेतो बालुवा समुद्र तट संग एक टहल लिनुहोस्।
त्यहाँ धेरै स्वादिष्ट ताजा समुद्री खाना छ, तर कुनै टिभी, अलार्म घडीहरु, वा फोनहरु, र मात्र यातायात iguanas कुचल खोल बोर्डवाक संग भटकिरहेको छ।
यो चिसो शैम्पेन तपाइँको लागी पर्खिरहेको छ जब तपाइँ आइपुग्नुहुन्छ, साथ साथै ज्वलन्त कोरल चट्टानहरु विदेशी माछा संग शानदार पानी को दुनिया मा snorkeling को लागी मात्र कदम टाढा छ।
8. जादू रिसोर्ट - सेडोना, एरिजोना
जादू रिसोर्ट जोडीहरु को लागी एक आराम, तनाव-मुक्त पलायन को लागी कि उनीहरुको समग्र स्वास्थ्य मा सुधार गर्न सक्छन् को लागी महान छ।
Boynton घाटी, को लागी जानिन्छ उपचार को लागी सकारात्मक उर्जा भगाउने, सेडोना को विशिष्ट रातो चट्टानहरु द्वारा घेरिएको छ।
यो पनि Mii Amo, एक विश्व प्रसिद्ध स्पा कि ग्राहकहरु मूल निवासी अमेरिकी ज्ञान र सीमा शुल्क बाट प्रेरित उपचार को रूप मा असाधारण लाभ प्रदान गर्दछ घरहरु लाई प्रदान गर्दछ।
निजी डेक, शानदार दृश्यहरु, र मधुमक्खी ग्यास fireplaces सबै कोठा र सुइट्स मा उपलब्ध छन्, जो मामूली pueblo- शैली घरहरुमा राखिएको छ।
माउन्टेन बाइकि,, पैदल यात्रा, पौडी, गोल्फ, खाना पकाउने कार्यशालाहरु, योग, ध्यान, र अन्य गतिविधिहरु सबै उपलब्ध छन्।
9. क्लिफ हाउस - केप नेडिक, मेन
क्लिफ हाउस एक प्रसिद्ध मेन रिसोर्ट हो कि रोमान्स को लागी जोडीहरु लाई आकर्षित गर्दछ। यो लगभग १५० बर्ष को लागी अतिथिहरु लाई स्वागत गरी रहेको छ र अटलांटिक संगै फैलिएको छ, लुकाउने सागर दृश्यहरु र उत्तम मालिश उपचार संग एक स्पा को पेशकश।
त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्टहरु छन् जहाँ तपाइँ क्षेत्र को उल्लेखनीय अद्भुत नमूना गर्न सक्नुहुन्छ, ताजा समुद्री खाना, साथै समुद्री कयाकिंग जस्तै मनोरञ्जन गतिविधिहरु को एक किसिम को रूप मा।
तीन पूल, एक बाहिरी ध्यान भूलभुलैया, फिटनेस कार्यक्रम, र ग्यास फायरप्लेस र निजी बालकनी संग वयस्क मात्र अपार्टमेन्ट सुविधाहरु बीच छन्।
10. ब्रश क्रीक खेत - साराटोगा, वायोमिंग
ब्रश क्रीक खेत दुई को लागी एक रोमान्टिक पलायन को लागी उत्कृष्ट छ। वाइल्ड वेस्ट को रोमान्टिकवाद र गतिविधिहरु को एक श्रृंखला वर्ष भर हाम्रो विलासी सबै समावेशी अतिथि खेत मा आनन्द लिनुहोस्।
स्कीइ,, स्नोबोर्डि,, स्नोमोबिलि, र स्नोशोइing सबै जाडो मा उपलब्ध छन्।
न्यानो महीनाहरु को दौरान, सम्पत्ती को ट्रेल्स को 50 मील को माध्यम बाट एक सवारी को लागी एक घोडा लिनुहोस्, माछा उड्न, योग अभ्यास, र त्यसपछि स्पा उपचार संग आराम।
साथै शानदार भोजन शामिल छ। यदि तपाइँ "घर भाडामा लिनुहुन्छ" सम्पूर्ण सम्पत्ती वा भव्य केबिन घरहरु मध्ये एक भाडामा लिने विकल्प छ।
10 अमेरिका मा सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्ट्स
1. Stowe माउन्टेन रिसोर्ट: Stowe, वरमोंट
Stowe माउन्टेन रिसोर्ट उत्तरी वरमोंट मा एक स्कीयर सपना छ, ४485५ स्कीएबल एकर, ११116 मार्गहरु, र १२ लिफ्ट शिखर सम्मेलन को लागी उत्सुक पर्यटकहरु लाई स्वागत छ।
माउन्ट मन्सफील्ड र स्प्रूस पीक, जो सजीलै एक गोंडोला द्वारा जोडिएको छ, रिसोर्ट को हिस्सा हो। रिसोर्ट मा शुरुआती र उन्नत ट्रेल्स को एक राम्रो मिश्रण शामिल छ, जे होस्, यो मुख्य रूप मा मध्यवर्ती स्कीयर को उद्देश्य हो।
विशेषज्ञ स्कीयरहरु को भूभाग पार्क को धेरै रैंप, जम्प, र रेल मा आफ्नो कौशल को परीक्षण गर्न सक्छन्। यदि तपाइँ डाउनहिल ढलानहरु लाई निपट्न चाहनुहुन्न भने, रिसोर्टले क्रस-कन्ट्री स्कीइ provides पनि प्रदान गर्दछ। Spruce पीक मा लज बस्ने ठाउँ हो यदि तपाइँ Stowe माउन्टेन रिसोर्ट मा स्कीइ गर्दै हुनुहुन्छ।
लज Stowe मा मात्र लक्जरी रिसोर्ट हो कि स्की मा, स्की बाहिर पहुँच को अनुमति दिन्छ, र यो ट्रेल्स को सबै को लागी सुविधाजनक पहुँच प्रदान गर्दछ। पहाड मा एक लामो दिन पछि साइट मा स्पा मा पिघलना।
त्यसपछि, एक क्लासिक अतिथि कोठा, सुइट, वा penthouses, अर्को दिन को गतिविधिहरु को लागी आराम; तपाइँ पनि एक निजी शेफ र व्यक्तिगत बटलर सेवा संग सुसज्जित एक लक्जरी भाडा केबिन आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
2. Killington स्की रिसोर्ट: Killington, वरमोंट
किलिंग्टन स्की रिसोर्ट २०० भन्दा बढी मार्गहरु मध्य वरमोंट मा सात चोटिहरु मा फैलिएको छ, त्यसैले तपाइँ दिनहरु को लागी स्की गर्न सक्नुहुन्छ र कहिल्यै थकित हुनुहुन्न। ट्रेल्स को सरासर संख्या सुनिश्चित गर्दछ कि स्कीयरहरु र सबै क्षमताहरु को snowboarders आफ्नो मनपर्ने केहि पाउनुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, पहाड, शुरुवात भन्दा मध्यवर्ती र अनुभवी स्कीयर को लागी अधिक पूरा गर्दछ। शैतान को बेला, बाहिरी सीमा, र कास्केड सबै खडा रन हो कि तपाइँ हावा को लागी हँसिलो छोड्नुहुनेछ।
यसको अतिरिक्त, रिसोर्ट को भूभाग पार्क फ्रीस्टाइल र चाल अभ्यास को लागी पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। Killington ग्रान्ड रिसोर्ट होटल एक महान बस्ने ठाउँ हो किनकि यसले तपाइँलाई हिउँले ढाकिएको पुल को माध्यम बाट र पहाड को बाहिर स्की गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
तातो पोखरी, तातो टब, रेस्टुरेन्ट, खेल कोठा, र स्वास्थ्य क्लब सबै अघिल्लो पाहुनाहरु द्वारा प्रशंसा गरिएको छ। उल्लेख गर्न को लागी, ढलानहरु मा एक दिन पछि Killington ग्रान्ड स्पा को एक यात्रा कडा मांसपेशिहरु लाई आराम गर्न को लागी एक महान तरीका हो।
3. ब्रेटन वुड्स: ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर
Bretton वुड्स न्यू हैम्पशायर को सबैभन्दा ठूलो स्की रिसोर्ट हो, सेवाहरु को एक ढुक्क संग तपाइँको स्की छुट्टी एक सफल बनाउन। रिसोर्ट मा दस लिफ्टहरु छन् कि tra tra ट्रेल्स र ग्लेड्स, साथै वार्षिक हिमपात को २०० इन्च भन्दा बढि सेवा गर्दछ।
ढलानहरु बाहिर, त्यहाँ पनी धेरै रमाईलो गर्न को लागी छ। नॉर्डिक स्कीइ or वा स्नोशूइ two दुई जाडो गतिविधिहरु छन् कि कम कडा छन्।
यस बीच, एक टयूबिंग सुविधा, एक बच्चाहरु स्नोमोबाइल पार्क, र जाडो बाइक यात्राहरु लाई अझ धेरै पारिवारिक मनोरन्जन प्रदान गर्दछ।
4. Sugarloaf: Carrabassett उपत्यका, मेन
Sugarloaf न्यू इ England्गल्याण्डको शीर्ष स्की रिसोर्ट्स मध्ये एक हो, 1,240 एकड स्कीबल इलाका र २,2,820२० फुट ठाडो ड्रप संग। १162२ ट्रेल्स र ग्लेड स्कीयर को सबै स्तरहरु लाई पूरा गर्न को लागी, सजीलो मात्र विशेषज्ञ को लागी रन संग।
साथै, १३ स्की लिफ्टहरु संग, तपाइँ शीर्ष को लागी एक सवारी को लागी लाइन मा पर्खनुको सट्टा स्कीइ more गर्न धेरै समय खर्च गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। जे होस्, रोमाञ्चक गतिविधिहरु त्यहाँ समाप्त हुँदैनन्।
क्रस कन्ट्री स्कीइ,, कुकुर स्लेजिंग, हिउँ मा मोटो बाइकिking, र आइस स्केटि visitors Sugarloaf आगन्तुकहरु को लागी सबै विकल्प हुन्।
त्यहाँ मनोरन्जन राख्न को लागी पहाड को आधार मा रेस्टुरेन्ट र पसलहरु धेरै छन्।
अघिल्लो आगन्तुकहरु Sugarloaf माउन्टेन होटल, जो एक ठूलो आउटडोर तातो टब, साइट मा भोजन, स्की क्षेत्र को लागी एक रिसोर्ट शटल, र आश्चर्यजनक पहाडी दृश्यहरु को लागी जानु भन्दा पहिले एक नाश्ता को लागी ४५ उत्तर बाट रोक्न सुझाव दिन्छन्।
5. क्रिस्टल माउन्टेन: थम्पसनभिल, मिशिगन
यो मिडवेस्ट स्की रिसोर्ट, Traverse शहर को 30 माईल दक्षिण पश्चिम मा स्थित छ, प्रति वर्ष 11 फिट हिउँ प्राप्त गर्दछ, आदर्श स्थिति सुनिश्चित।
Skiers आठ लिफ्ट विकल्पहरु को माध्यम बाट 58 ट्रेल्स पहुँच गर्न सक्छन्, जस मध्ये केहि रात स्कीइ for को लागी जलाइएको छ। लगभग आधा ट्रेल्स मध्यवर्ती स्कीयरहरु को लागी उपयुक्त छन्, जबकि 22% शुरुआती को लागी र 30% अनुभवी स्कीयरहरु को लागी हो।
र्‍याम्प, आधा पाइप, कूद, र अन्य सुविधाहरु तीन भूभाग पार्क क्षेत्रहरु मा उपलब्ध छन्। सपाट जमीन मा रहन चाहनेहरु को लागी, क्रस देश स्कीइ an एक विकल्प हो।
आगन्तुकहरु एक स्केटि r रिंक, एक आउटडोर तातो टब केन्द्र, बुटीक, प्रो पसल, रेस्टुरेन्ट, र पहाड को खुट्टा मा होटल विकल्प को एक किस्म पाउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ एक ठूलो पार्टी संग जाँदै हुनुहुन्छ, क्रिस्टल डेन, माउन्टेन मा Inn मा बंगलाहरुमा रहनुहोस् यदि तपाइँ काम र खेल, वा क्लासिक अतिथि कोठा को लागी ह्याम्लेट को संयोजन गर्न को लागी आवश्यक छ।
6. Whiteface माउन्टेन रिसोर्ट: Wilmington, न्यूयोर्क
न केवल तपाइँ मा एक टिकाऊ स्की पहाड भेट्टाउनुहुनेछ व्हाइटफेस माउन्टेन रिसोर्ट, तर तपाइँ पनी Rockies को पूर्व मा सबैभन्दा ठूलो ठाडो ड्रप पाउनुहुनेछ।
पूर्वोत्तर मा सबैभन्दा लामो मध्यवर्ती पाठ्यक्रमहरु को एक, साथै "स्लाइड," जो अनिवार्य रूप देखि ठाडो, डबल कालो हीरा कठिनाई संग ढलान जस्तै ड्रप, रिसोर्ट को अद्वितीय विशेषताहरु को बीच मा छन्।
Skiers पनि एक एड्रेनालाईन भीड कि एक सानो कम डरलाग्दो छ को लागी भूभाग पार्क मा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ व्हाइटफेस मा एक नर्वस स्कीयर को रूप मा आउनुहुन्छ, उपलब्ध धेरै निजी वा समूह पाठहरु मध्ये एक तपाइँ ट्रेल्स मा विश्वास हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ कटाई समाप्त गरे पछि, केहि समय लिनुहोस् यस पर्वत रिसोर्ट मा ओलम्पिक स्थलहरु हेर्न को लागी, जो १ 1980 Win० शीतकालीन ओलम्पिक को मेजबानी गरीयो।
त्यसोभए, एक भित्री पूल र एक आइस रिंक जस्ता सुविधाहरु संग एक परिवार को अनुकूल माहौल को लागी, गोल्डन एरो लेकसाइड रिसोर्ट वा होटल नर्थ वुड्स मा रहन, जो दुबै शहर ताल Placid नजिकै छन्।
7. Wintergreen रिसोर्ट: Nellysford, भर्जिनिया
दक्षिण मा जाडो यसको स्की रिसोर्ट्स, र वर्जीनिया बिना छैन Wintergreen रिसोर्ट सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक हो। रिसोर्ट को दुई लिफ्ट विभिन्न कठिनाई स्तर को 26 ट्रेल्स को लागी पहुँच प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ undulating मध्यवर्ती ढलानहरु छन् जहाँ तपाइँ दृश्यहरु मा लिन सक्नुहुन्छ, साथै खडा विशेषज्ञ पटरिहरु कि सही पहाड को आधार स्कीयरहरु लाई लिनुहोस्।
Ridgely रमाईलो पार्क, एक विशिष्ट बच्चाहरु को खण्ड, र पहाड को प्रसाद बाहिर गोल स्की चाल को अभ्यास को लागी एक भूभाग पार्क। Wintergreen मा, आगन्तुकहरु पनि समूह वा निजी स्कीइ lessons पाठ को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ।
यो रिसोर्ट गतिविधि को मामला मा यसको आकार को कमी को लागी बनाउँछ जब यसको पश्चिमी समकक्षहरु को तुलना मा। जब तपाइँ आफ्नो स्कीइ of को भरिएको छ, राज्य को सबैभन्दा ठूलो टयूबिंग पार्क को कोशिश, रिसोर्ट को इनडोर पूल मा डुब्न, वा Wintergreen स्पा मा आफैलाई लाड।
रिसोर्ट माउन्टेन इन मा परम्परागत होटल कोठा बाट condominium र घर भाडा संभावनाहरु को लागी आवास विकल्प को एक किस्म प्रदान गर्दछ।
तपाइँ ब्लू रिज माउन्टेन्स को दृश्य को बावजूद जो आवास विकल्प तपाइँ छनौट गर्नुहुन्छ।
8. टिम्बरलाइन चार मौसम रिसोर्ट: डेविस, पश्चिम भर्जिनिया
यो टिम्बरलाइन फोर सीजन रिसोर्ट ट्रेल्स को एक किसिम को प्रस्ताव गर्दछ, शुरुआती मैत्री बाटो बाट डबल कालो हीरा रन सम्म।
मध्यवर्ती ट्विस्टर पथ स्कीयरहरु लाई उनीहरुको पालो सिद्ध गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, जबकि शुरुवात मैत्री माथिल्लो Salamander ट्रेल शुरुआती पहाड चोटी बाट तल झर्न अनुमति दिन्छ।
यसको अतिरिक्त, दुई भूभाग पार्क स्कीयरहरु र स्नोबोर्डर्स को लागी feats र चाल को अभ्यास को लागी पर्याप्त अवसर प्रदान गर्दछ। सानो जम्प र मिनी बक्स स्नो Squall भूभाग पार्क मा उपलब्ध छन् जो फ्रीस्टाइल स्टन्ट र जस्तै मा सहज गर्न चाहान्छन् को लागी उपलब्ध छन्।
जब तपाइँ तयार हुनुहुन्छ, थन्डर स्नो टेर्रेन पार्क को लागी अधिक चुनौतीपूर्ण सुविधाहरु र रेल को लागी। तपाइँ एक पेशेवर शिक्षक संग एक मा एक काम गर्न को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ वा एक समूह पाठ को लागी छनौट गर्नुहोस्, चाहे यो ढलानहरुमा तपाइँको पहिलो पटक हो वा तपाइँ मात्र तपाइँको रन सुधार गर्न को लागी केहि अतिरिक्त सूचकहरु चाहानुहुन्छ।
मुख्य लज खाना र पेय विकल्पहरु को एक किसिम को तपाइँको पोस्ट स्कीइ app भूख भर्न को लागी छ, तर आगन्तुकहरु लाई पनि पहाड को खुट्टा मा रेस्टुरेन्ट को भ्रमण मन पर्छ।
टिम्बरलाइन होटल रिसोर्ट को लागी सुविधाजनक स्की-इन/स्की-आउट पहुँच प्रदान गर्दछ, जबकि अन्य मोटल र वरपरका ओछ्यान-र-नाश्ता पनि पहाडको नजिक छन्।
9. क्रिस्टल माउन्टेन रिसोर्ट: पियर्स काउन्टी, वाशिंगटन
यो रिसोर्ट, माउन्ट रेनियर राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिर मात्र स्थित, वाशिंगटन को सबै भन्दा राम्रो स्की गन्तव्यहरु मध्ये एक हो। आगन्तुकहरु ग्यारह लिफ्टहरु को माध्यम बाट ५ authorized अधिकृत ट्रेल्स पहुँच गर्न सक्छन्, ती मध्ये आधा भन्दा बढी मध्यवर्ती स्तर रनहरु संग।
बाँकी शुरुवात र विशेषज्ञ ढलानहरु मा विभाजित छ, जो सबै को लगभग हरेक बर्ष 500 इन्च बर्फ प्राप्त। समुद्री सतह बाट ,7,000,००० फिट माथि रहेको समिट हाउस रेष्टुरेन्टले भोकाएको स्कीयरहरुलाई अति उत्तम खाना प्रदान गर्दछ।
क्याम्पबेल बेसिन लज मध्य पहाडी भाडा, साथ साथै आधार को नजिकै अतिरिक्त भोजन विकल्प को एक दायरा सेवा गर्दछ।
अल्पाइन Inn, गाउँ सराय, र Quicksilver लज थकित साहसी को लागी आधार मा तीन आरामदायक आवास विकल्प हो।
यी होटलहरु शैली मा भिन्न हुन्छन्, तर ती सबै जस्तै सुविधाजनक वाईफाई र स्की लिफ्टहरु को लागी पहुँच को रूप मा सुविधाजनक सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। को क्रिस्टल माउन्टेन रिसोर्ट सिएटल को लगभग 80 माईल दक्षिण पूर्व मा स्थित छ।
10. Breckenridge स्की रिसोर्ट: Breckenridge, कोलोराडो
यदि तपाइँ यसलाई Breckenridge बनाउनुभएको छ, तपाइँ पहिले नै देश मा शीर्ष स्कीइ locations स्थानहरु मध्ये एक मा आइपुग्नुभएको छ, र Breckenridge स्की रिसोर्ट मा सुविधाहरु लाई तपाइँ तपाइँको बास को अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ।
यो विशाल स्की रिसोर्ट (डेन्भर को लगभग 60 मील दक्षिण पश्चिम) एक भूलभुलैया हो कि अन्वेषण गर्न को लागी माग्दछ: पहाड को शिखर 12,998 फीट सम्म उगन्छ, र त्यहाँ 187 पथ 34 स्की लिफ्टहरु द्वारा सेवा गरीरहेका छन्।
तपाइँ आफ्नो कौशल मा एक रिसोर्ट को भूभाग पार्क मा काम गर्न सक्नुहुन्छ वा उच्च अल्पाइन भू -भाग ट्रेल्स कि यस क्षेत्र को लागी अद्वितीय छन् मा तपाइँको हात को प्रयास गर्नुहोस्। यो ढलानहरु मा एक भूख काम पछि शहर हिट गर्ने समय हो।
बुटीक, क्याफेहरु, संग्रहालयहरु, र ब्रुअरीज पुरानो शहर जिल्ला मा प्रशस्त छन्, एक व्यापक सांस्कृतिक अनुभव मा तपाइँको स्की यात्रा परिवर्तन।
थकित स्कीयरहरु रिसोर्ट को प्रमुख होटल सम्पत्तिहरु, जस्तै क्रिस्टल पीक लज र एक स्की हिल प्लेस मा एक मा आफ्नो टाउको आराम गर्न सक्छन्। स्की भ्यालेट, घर मा लिफ्ट टिकट, र पहाड को लागी द्रुत पहुँच संग एक महान स्थान सबै एक हॉलमार्क होटल मा एक बसाई संगै सामेल छन्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ यो लेख तपाइँको नजिक रिसोर्ट्स मा माया गर्नुभयो र कि यो तपाइँको लागी धेरै उपयोगी थियो।
यदि तपाइँ कुनै प्रश्न वा तपाइँको नजिकै रिसोर्ट्स को बारे मा सुझाव छ, कृपया एक टिप्पणी छोड्न को लागी राम्रो गर्न को लागी र यो पनी, तपाइँका साथीहरु संग यो लेख साझा गर्नुहोस्।
टैग:फ्लोरिडा मा सबै समावेशी समुद्र तट रिसोर्ट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै समावेशी समुद्र तट रिसोर्ट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै समावेशी रिसोर्ट्स, जोडीहरु को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै समावेशी रिसोर्ट्स, मेरो नजिक सबै समावेशी रिसोर्ट्स, सबै भन्दा राम्रो समावेशी रिसोर्ट्स, युगल को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो छुट्टी रिसोर्ट्स
कसले ओछ्यानमा बग विनाशकारीलाई भुक्तानी गर्दछ: घरमालिक वा भाडादारहरू?
टेस्ट ड्राइभ नयाँ कारहरु को लागी अतिरिक्त नगद कमाउने उत्तम तरिका
टर्मिनल र Precheck स्थिति जानकारी संग मोन्टाना मा एयरपोर्टहरु
पुरुष र शीर्ष Activewear कपडा ब्रान्डहरु को लागी सर्वश्रेष्ठ कसरत कपडा